I-White House inqume imeko yongxamiseko lukazwelonke kunye namanqaku | IPhone iindaba
uDonald Trump Ungomnye wabongameli abaphambili be-United States kwimbali. Ukungenelela kwakhe kwiakhawunti yakhe yeTwitter kugqithise kwiingxelo zeakhawunti yakhe esemthethweni. Nangona kunjalo, oko akuthethi ukuba uyaqhubeka nokugcina iinjongo zakhe kunye nokuzimisela ekwakheni udonga phakathi kwe-United States neMexico, into embiza yona kuba akanankxaso yaneleyo.
Ngenxa yale nto, I-White House inyanzelise imeko yongxamiseko lwesizwe kwiintsuku nje ezimbalwa ezidlulileyo. Eyona nto ihlekisayo, ukuba kungakho into ehlekisayo ngalo mbandela, yindlela eyalelwa ngayo. Ngaba USara Sanders, Unobhala weendaba e-White House ngomboniso wenqaku eliphuma kwiNkqubo yamanqaku ye-iOS. Kuyahlekisa kwaye kungabi nzulu kakhulu.
USara Sanders upapasha inqaku elibhengeza "imeko yonxunguphalo yesizwe"
Zihambile iveki ukusukela lo msitho kodwa ukuza kuthi ga kule mini ndisahleli iyaqhubeka nokuvelisa ukuhleka kumajelo asekuhlaleni. Unobhala weendaba e-White House, uSarah Sanders, wasebenzisa iakhawunti yakhe esemthethweni kuTwitter ukubhengeza isibhengezo semeko "yongxamiseko lwesizwe" ebekwe nguDonald Trump kumsitho obubanjelwe eRose Garden yeWhite House.
INgxelo yeBhili-mali kaRhulumente: pic.twitter.com/DrNv9D4rEi
-USara Sanders (@PressSec) 14 Februwari we2019
Ukuba sihlalutya i-tweet epapashwe nguSanders sibona ukuba injani inqaku elivela kwi-App ye-iOS Notes, kwinto esiyaziyo ukuba yi-iPhone. Kwakhona, ukuba siyaqonda ukuba zimbini ezinye iinkcukacha. Kwindawo yokuqala, sisikrini-skrini, into engekho nzulu kumcimbi obaluleke njengokumiselwa kwemeko yongxamiseko yezi mpawu. Okwesibini, sinokubona inqaku elimnyama embindini womfanekiso, iya kuba njalo ukuhlela okwenziwe ngengozi ngabakwaSanders kunye nenketho yokuhlela iifoto-skrini ezongezwe kwi-iOS 12.
Le nyani iya kuphawulwa ngembali ngokusebenzisa umfanekiso-skrini wenqaku le-iPhone ovela kunobhala weendaba e-White House. Zaziphi izinto zokushicilelwa ezipapashwe kwiiwebhusayithi ezisemthethweni okanye nakwiingxelo ezithiwe thaca kwimifanekiso yequmrhu?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » I-White House inqume imeko yongxamiseko lukazwelonke kunye namanqaku